Arabia Saodita: Mitsingilahila Ny Ampitson’i Hamza Kashgari, Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2012 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Svenska, বাংলা, Ελληνικά, Español, English
Voatonona ho nilaza ny hampodian'i Malezia an’ i Kashgari an-tanindrazana any Arabia Saodita ny Minisitry ny Atitany Maleziana, Hishammudin Hussein. Misy pejy Facebook entina hanehoana ny firahalahiana amin'i Kashgari natsangana tamin'ny tapaky ny herinandro izay ary manana mpikambana mihoatra ny 1,500.
@FadiahNadwa: Namoaka baiko vonjimaika ny mpitsara Rohana Yusuf mba hanakanana ny governemanta tsy hampody an'i #HamzaKashgari ho any Arabia Saodita. An-dalam-panomezana ny baikon'ny fitsarana ho an'ny mpitandro filaminana.
Mino ilay Saodiana mpitoraka bilaogy Ahmed Al Omran fa mihoatra noho ny fifampijerijerena ity raharaha ity:
@onlymytweets: Tsy mahatadidy Ayah na Hadith iray aho niteny fa namindra ny fahefana tamin'ny olombelona mba hitsara Andriamanitra. Sa izaho irery ve no mahatsikaritra izany? #HamzaKashgari @SalmaanTaseer
@majda72: Te-hatory aho nefa kikisan'ny tahotra aho ny amin'i #HamzaKashgari Manohy mitsikilo ny twitter & mieritreritra ny ratsy aho.
Tezitra amin'ireo fihetseham-po ao amin'ny media sosialy i @RFatani, mitoraka bitsika:
@RFatani: mpitoraka bitsika an'arivony no mangataka ny hikorisàn'ny lohan'i #HamzaKashgari amin'ny tany! Tokony voaroaka anatin'ireo firenena izay manana lalàna momba ny ‘famporisihana hankahala’ ireny olona ireny
Naneho ny fihetseham-po miparitaka ny bitsik'ilay mpanoratra Khaled Almaeena, milaza fa tsy mifanaraka amin'ny heloka bevava vita ireo sazy eritreretina:
@khaledalmaeena: Miantra Andriamanitra ary raha velona i Mohammed (PBUH) dia nihaino ny fialan-tsininy sy namela ny helony.”
@AboTamem: @nsurendrann An-dalam-podiana ny ralahalantsika HAMZA…tsy eo ambanin'ny lalànareo izy!! #hamzakashgari
Nahatsapa ihany koa i @mkabmr fa lasa lavitra i Kashgari:
@mkambr: Raha izaho manokana dia olona tsy misy ilàna azy izay rehetra manala baraka ny mpaminany Muhammad PBUH #HamzaKashgari
@ArabRevolution: Milaza fotsiny aho fa, na izaho na ieo Silamo an-tapitrisany dia tsy miombon-kevitra amin'izay mety hataon'i Arabia Saodita amin'i #HamzaKashgari #freehamza